वर्षा र हावाहुरीले ४ हजार बढी विद्युतीय पोलमा क्षति - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार ०३, २०७५ 5301 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नियमित भइरहेको वर्षा र हावाहुरीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका ४ हजार १ सय विद्युतीय पोलमा क्षति पुर्याएको छ । हावाहुरीसहितको वर्षाले वितेको एक महिनामा देशभरका विद्युतीय पोलमा क्षति पुगेको हो ।
११ केभी वितरण लाइनको कमजोर संरचनाका कारण हावाहुरीले ठूलो संख्यामा पोल ढालेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार यो अवधिमा २ सय भन्दा बढी ट्रान्सफर्ममरमा पनि क्षति पुगेको छ ।
पोल तथा ट्रान्सफर्मर ढल्दा करोडौं रुपैयाँको आर्थिक भार थपिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा वर्षा र हावाहुरीले पोल तथा ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुर्याउँदा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । उद्योगहरुमा पनि ट्रिपिङको समस्या आएको छ ।
वितरण प्रणालीको संरचना कमजोर हुँदा वर्षा याम सुरु भएपछि समस्या दोहोरिने गरेको घिसिङले बताए ।
‘हाम्रो वितरण प्रणाली ३३/११ केभी लाइनमा सिमित छ,’ उनले भने,‘यसको स्तरोन्नति नगरेमा हरेक वर्षको वर्षा याममा समस्या दोहोरिन्छ ।’
अहिलेको समस्या समाधान गर्न उच्च क्षमताको प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण सुरु गरिएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार वर्षा याममा हावाहुरीका कारण हुने ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न औद्योगिक क्षेत्रको वितरण प्रणाली १३२ केभीमा स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको काम अघि बढेको छ ।